Janaraal Stephen Townsend, ayaa sheegay Soomaaliya inay Kenya ka Amni badan tahay | Onkod Radio
Janaraal Stephen Townsend, ayaa sheegay Soomaaliya inay Kenya ka Amni badan tahay
Muqdisho (Onkod Radio) Madaxa taliska ciidamada Mareykanka ee Africa (AFRICOM) Janaraal Stephen Townsend, ayaa shaaca ka qaaday in Kenya ay uga halis badan tahay Soomaaliya, in ciidamada Mareykanka ee loo xil-saaray Soomaaliya, ay ka howlgalaan.
Janaraal Townsend, oo su’aalo uga jawaabayay guddi ka tirsan Senate-ka Mareykanka ayaa sheegay in go’aankii uu madaxweyne Trump, Ciidamada uga soo saaray Soomaaliya uu adkeeyey inay la dagaalamaan Al-Shabaab.
Waxa uu intaas ku daray in soo bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya, ay dadka Mareykanka ah ee ku sugan dalalka deriska la ah ka dhigtay kuwa wajahaya halis ka badan tii hore.
“Aragtidayda waxay tahay in dagaalkeena hadda goos gooska ah, ama aan ugu magac darnay dagaalka usoo safarka, uu horseeday caqabado iyo halis cusub oo soo wajahday ciidamadeena,” ayuu yiri Townsend.
Hadalka Townsend ee ah, in ciidamada Mareykanka ay Kenya, uga halis badan tahay inay ka howlgalaan Soomaaliya, ayaa imaanaya ayada oo dalka Kenya, uu ku asiibay weerarkii ugu khasaaraha badnaa ee Al-Shabaab ay la beegsato.
Al-Shabaab ayaa 5-tii bishii Janaayo 2020 weeraray saldhig ay ciidamada Mareykanka ku lahaayeen gudaha dalka Kenya, ee la yiraahdo Mand Bay, halkaasi oo ay ku dileen askari iyo laba qandaraasle oo Mareykan ah.